Baby Eyebrow - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကေလးမၾက်ခုံးထူေအာင် ကွမ်း႐ိုးနဲ႔ ဆွဲေပးသင့်သလား ?
“ဟဲ့ ကေလးေလးက မၾက်ခုံးေလးေတွ ပါးလိုက်တာ..ကွမ်း႐ိုးေလးနဲ႔ ဆွဲေပးေလ”ဟူေသာ စကားသံၿမိဳးကို မိဘေတာ်ေတာ်ျမားျမား ကြားဖူးကြမွာပါ။
ခေတ်ေပါင်းျမားစွာ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ေဆာင်လာခဲ့ကြသည့် ေရွးမြန်မာတို႔၏ ကေလးပြဳစုေစာင့်ေရွာက်ေရးနည်းလမ်းျမားက မွန်ကန်သင့်ေတာ်တာတွေရွိသလို ယေန႔ခေတ်ေဆးသိပ္ပံပညာအမြင်ႏွင့် မေၾလာ်ကန်တာတွေလည်းရွိ၏။
အၿခိဳ႕က သေျခာေပါက်ေဘးဖြဈစေသော်လည်း အၿခိဳ႕ကား သိသိသာသာ အႀကိဳးဖြဈေစ၏။
အၿခိဳ႕မွာကား ေဘးမဖြဈစေသော်လည်း အႀကိဳးတစုံတရာ ဖြဈထွန်းမည်မဖြဈထွန်းမည် မသေျခာ။
ကွမ်း႐ိုးႏွင့် မၾက်ခုံးေမွွးဆွဲေပးခြင်းသည် အထက်ပါ တတိယအုပ်စုတွင်ပါဝင်၏။
အန္တရာယ် မဖြဈစေနိုင်ေသာ်လည်း အမွန်တကယ် အႀကိဳးဖြဈမဖြဈ ေလ့လာထားေသာ သုတေသနစာတမ်းျမားမူ ႏိုင်ငံတကာတွင်လည်း မေတွ႔ရ။
? “မၾက်ခုံးဘာလို႔ ထူချင်ကြတာလဲ”
မည်သူမဆို ‘လွချင်လို႔’ ဟုသာ ဖြေမည် မုျခ။
မိဘတိုင်းမိမိသားသမီးကို မၾက်လုံးမၾက်ခုံး လွစေချင်သည်။
မၾက်ခုံးထူထူေလးတဈခုက မၾက်ႏွာလွလွေလးတဈခုဖြဈဖို႔ အေကာင်းဆုံး ပံ့ပိုးေပးႏိုင်သည်မဟုတ်လား။
မၾက်ခုံးထူထူေလးတဈခုေကြာင့် ပိုလွပေျခာေမာစေသလို ၎င်း၏ အဓိကတာဝန်ဖြဈေသာ မၾက်လုံးကို အေႏွာင့်အယွက်ဖြဈစေမည့် ေျခႇး၊အမႈန်အမွွား၊ နေပူဒဏ်တို႔မွလည်း အထိုက်အေၾလာက် ကာကွယ်ေပးႏိုင်မည် ဖြဈ၏။
အၿခိဳ႕ကား ၿမိဳး႐ိုးဗီဇအရ သဘာဝ၏လက်ေဆာင်အဖြဈ မၾက်ခုံးေမွွးထူထူေလး ပါလာကြေသာ်လည်း အၿခိဳ႕အတွက်ေတာ့ မၾက်ခုံးေမွွးကံကြမ္မာကား ႀကိဳးတိုးႀကဲတဲ။
မည်သည့်အရာမဆို သဘာဝအတိုင်းသာအေကာင်းဆုံးဖြဈသည် မွန်ေသာ်လည်း မိဘ၏ မေတ္တာႏွင့် လွစေချင်စိတ်က သဘာဝတရားကို အံတုသာလွန်ချင်လာေသာအခါ ကေလးေလး ပိုေျခာပိုလွဖို႔ရာ ကြိဳးစားကြလေသည်။
ႏွာတံေလးေပါ်ေအာင် ပုံသွင်းတတ်ကြသလို မၾက်ခုံးေမွွးကိုကွမ်း႐ိုးႏွင့်ဆွဲေပးကြ၏။
ႏိုင်ငံတကာတွင်ေတာ့ အခြားနည်းလမ်းျမားသုံးကြေသာ်လည်း မြန်မာ့႐ိုးရာတွင်မူ ကွမ်း႐ိုးဆွဲသည့် ဓေလ့သာလူသိျမား၏။
?”ကွမ်း႐ိုးနဲ႔မၾက်ခုံးဆွဲေပးရင် ကေလးမၾက်ခုံး တကယ်ထူလာမွာလား”
မၾက်ခုံးတကယ်ထူမထူထက် မဆွဲခင် ဘာသတိထားရမည် ဆိုသည်က ပိုအေရးကြီး၏။
သေျခာစွာေဆးေကြာထားဖို႔လို၏။ ရေႏွေးႏွင့် ပိုးသတ်ထားသင့်၏။
တဈလေအာက် ကေလးျမားတွင် အလွန်ႏုနယ်ေသးသဖြင့် မလုပ်သင့်။
ကေလးဆရာဝန်ႏွင့် တိုင်ပင်ပြီးမွ လုပ်သင့်၏။
ကေလးအသားအရေႏွင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ အနီကွက်ထလာခြင်း၊ အနာဖြဈခြင်းျမားဖြဈလာပါက ဆရာဝန်ႏွင့် အမြန်ဆုံးပြသရမည်ဖြဈသည်။
ကွမ်းရွက်ႏွင့် ကွမ်း႐ိုးသည် ႏိုင်ငံတကာ သုတေသနျမားအရ အလွန်ေဆးဘက်ဝင်၏။
Antioxident ဂုဏ်သတ္တိရွိသလို Niacin,Thiamin,Riboflavin,Carotene ႏွင့် Vitamin C စသည့် ဗိုက်တာမင်ျမားလည်း အလွန်ကႊယ်ဝ၏။
Chavicol ဟူသည့် Polyphenol ဓာတ်တဈၿမိဳးပါဝင်သည့် အတွက် အၿခိဳ႕ေရာဂါပိုးမွွားျမားကိုပင် သေစေနိုင်ေသာ အာနိသင် ရွိပေသည်။
ေခါင်းအစခြေအဆုံး ေရာဂါၿမိဳးစုံအတွက် ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်း႐ိုး၏ ေဆးဖက်ဝင်ပုံကို ေလ့လာထားသည့် သုတေသနျမားစွာရွိေသာ်လည်း မၾက်ခုံးထူစေသည့် အခၾက်ကိုကား သုတေသနမရွိေသးေပ။
ဤနေရာတွင် စိတ်ဝင်စားစရာ အခၾက်တဈခၾက်ေတွ႔ရ၏။
ႏိုင်ငံတကာတွင် ကေလးမၾက်ခုံးထူစေရန် ပြဳလုပ်သည့် နည်းလမ်းျမားပင်။
?”ႏိုင်ငံတကာမွာ ကေလးမၾက်ခုံးထူဖို႔ ဘာနည်းလမ်းတွေသုံးကြလဲ”
ယင်းနည်းလမ်းျမားတွင် ကေလး၏ မၾက်ခုံးအား ဆီတဈခုခု အနည်းငယ် ဂွမ်းႏွင့်တို႔ေပးပြီး ႏွဖူးဘက်သို႔ ဦးတည်၍ သိမ်သိမ်ေမွ႔ေမွ႔ႏူးႏူးညံ့ညံ့ ႏွိပ်နယ်(Masseage)ေပးခြင်းပါဝင်၏။
ကြက်ဆူဆီ၊ အုန်းဆီသန႔်သန႔်၊ Almond oil၊ သံလွင်ဆီ၊ ကြက်ဥအကာ၊ ရွားေစာင်းလက်ပတ် စသည်တို႔ကို အသုံးပြဳ တတ်ကြသည်။
ဓာတ်မတည့်မည့် Allergy ပြဴနာကို ေကြာက်၍ Patch test လုပ်၍ တည့်မတည့် စမ်းသပ်ပြီးမွ လုပ်တတ်ကြသည်။ တဈပါတ်ၾလႇင် သုံးေလးရက် ခန႔် လုပ်ေပးၾလႇင် ကေလးမၾက်ခုံးထူ၍ သန်စွမ်းလာမည်ဟု သူတို႔လည်း ယုံကြည်ကြ၏။
? “ဘယ်လိုအစာအဟာရဓာတ်ေတွ လိုအပ်လဲ”
– မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပန်းင႐ုတ်ပွ စသည့် ဗိုက်တာမင်A ကႊယ်ဝေသာ အစားအစာျမား
– လိမ္ေမာ်သီး၊ ေရွာက်သီး၊ သံပ႐ိုသီး၊ ပန်းေဂါ်ဖီစိမ်း၊ သင်္ေဘာသီး စသည့် ဗိုက်တာမင်C ကႊယ်ဝေသာ အစားအစာျမား
– မြေပဲ၊ သံလွင်ဆီ၊ ပင်စိမ်း၊ Almonds ၊ ဟင်းႏုႏွယ် အစရွိသည့် ဗိုက်တာမင်E ကႊယ်ဝေသာ အစားအစာျမား
– ေထာပတ်သီး၊ သဈကြားသီး၊ သံလွင်ဆီ၊ ဆလ်မွန်ငါး စသည့် Omega-3 fatty acids ကႊယ်ဝေသာ အစားအစာျမား
– ဥအၿမိဳးၿမိဳး၊ အစိမ်းေရာင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အၿမိဳးၿမိဳး၊ ေထာပတ်သီး၊ ဆလ်မွန်ငါး စသည့် Biotinဓာတ်ကႊယ်ဝေသာ အစားအစာျမားပင် ဖြဈသည်။
၎င်း အစားအစာျမားမွာ မၾက်ခုံးတဈခုတည်းအတွက်သာမက ခန္ဓာကိုယ်တဈခုလုံးအတွက်ပါ အသက်ရွည် ကျႏ်းမာစေမည့် အစားအေသာက် အဟာရဓာတ်ျမားလည်း ဖြဈပေသည်။ ကေလးျမားသာမက မၾက်ခုံးထူထူလွလွလိုချင်ေသာ လူကြီးျမားအတွက်ပါ အႀကိဳးရွိသည်ဟု ဆိုကြ၏။
သို႔ဖြဈရာ နိဂုံးျခဳပ်ဆိုရေသာ် ကွမ်း႐ိုးႏွင့်ဆွဲေပးခြင်းက မၾက်ခုံးကို Massage လုပ် ႏွိပ်နယ်ေပးသကဲ့သို႔ ဖြဈစေပြီး ၎င်းတို႔ ဆိုသလို ေမွွးညႇင်းေပါက်ျမားဆီသို႔ ေသွးပိုေၾလႇာက်ေအာင် လႈံ႕ေဆာ်ေပးရာမွ တဈဆင့် မၾက်ခုံးထူလာႏိုင်ခြင်းေကြာင့် ႐ိုးရာအစဉ်အလာတဈခုဖြဈေပါ်လာခြင်းျမားလားဟု စဉ်းစားစရာပင်။
ကွမ်းရွက်ႏွင့် ကွမ်း႐ိုးတွင်ပါဝင်ေသာ ေဆးဖက်ဝင် ဓာတ်ပစ္စည်းျမား အရေပြားအတွင်း စိမ့်ဝင်ခြင်းေကြာင့် ဟုတ်မဟုတ်အတွက်မူကား သုတေသနျမားမရွိေသး၍ အတိအကျမေပြာႏိုင်ေသးေပ။
ကွမ်း႐ိုးဆွဲေပးသည့် ဓေလ့ကေတာ့ မြန်မာတည်သေရွ႕ဆက်လက်တည်ရွိေနဦးမည်ကေတာ့ အသေအျခာပင်။